China OEM Custom Logo Dual Driver Wired Gaming headphone earphone EP-1245 With Microphone maka ekwentị mkpanaaka Xbox, PS4 rụpụta na ụlọ ọrụ | Yong Fang
OEM Custom Logo Dual Driver Wired Gaming headphone earphone EP-1245 Na Igwe okwu maka ekwentị mkpanaaka Xbox, PS4
Dual ọkwọ ụgbọala Spec:
Ọkwọ ụgbọala otu: 6MM
Mmetụta: 98dB +/- 3dB
Nzaghachi ugboro ugboro: 20Hz ~ 20KHz
Max. input ike: 30mW
Ogologo eriri: eriri TPE, 1.2M
Audio nkwụnye: 3.5mm gold-plated, L udi
Ọganihu Mic Spec:
Mic n'obosara: Ø4.0MM
Mmetụta: -38dB +/- 3dB
Nkwụnye ụdị: 3.5mm gold-plated
Na-akara Mic Spec:
Mmetụta: -42dB +/- 3dB
Dual Neodymium 6mm Ọkwọ ụgbọ ala DesignMaka akụkụ ọ bụla nke ihe ntị ahụ, n'ime ụlọ mkpuchi, enwere pc 2 nke bass dị ike 6mm neodymium drivers. Iji hụ kpọmkwem ndị ọkwọ ụgbọala n'ime ma nwee mmetụta nke ike nke ụda ahụ, n'ihu ụlọ ntị ntị bụ transperent. Ha nwere ike mụta nwa miri emi na nnukwu nghọta doro anya maka ịtụnanya nkwukọrịta na ahụmịhe egwuregwu;
Na mbughari Mgbanwe Agbanwe Agbanwe Igwe okwu】Maka mfe online nkwukọrịta na ọma ịgbanwe direction na n'akuku nke okwu, Ọ na-abịa a kemwepu na mgbanwe mgbanwe ọganihu mic. Ya mere, na nke a gaminggba Cha Cha ekweisi, anyị nwere ike hụ na crystal doro anya okwu;
【Multi Function Na Line Remote Control】Igwe okwu na-edoghị ya maka njikwa olu, igwe okwu nchịkwa, nhọrọ egwu, egwu egwu, zaa oku ekwentị, ma jụ oku ekwentị. Igwe a nwere ike iji igwe na-arụ ọrụ na igwe okwu inline na-arụ ọrụ n'ime njikwa ntanetị;
Smart Dual Igwe okwu Igwe na-arụ ọrụ Sistem Inside】Site na igwe okwu eji arụ ọrụ nke ọma na-arụ ọrụ n'ime njikwa ntanetị, igwe okwu na igwe okwu na-arụ ọrụ nwere ike iji amamihe rụọ ọrụ ọnụ yana njikwa niile nwere ike ịchịkwa ya nke ọma. Ọ bụrụ na anyị tinye igwe okwu ụda, igwe okwu inline ga-akwụsị ịrụ ọrụ, anyị nwere mkparịta ụka site na igwe okwu ụda; ọ bụrụ na anyị kwụpụ ụda ọkụ, igwe okwu inline ga-amalite na-arụ ọrụ na akpaghị aka, anyị ga-enwekwa mkparịta ụka site na igwe okwu inline n'ime njikwa. Na, agbanyeghị na anyị jiri igwe okwu ma ọ bụ igwe okwu inline, enwere ike ijikwa nkwukọrịta ahụ nke ọma site na njikwa inline;
【Universal 3.5mm audio jack Dakọtara na ọtụtụ ngwaọrụ】 Ejiri ya na 3.5mm jack jack, ọ na-arụ ọrụ na ọtụtụ ekwentị mkpanaaka, pad, laptọọpụ, PC na igwe egwu. Dika igwe ihe eji egwuri egwu egwu egwu, emebere ya nke oma maka ngwa egwu, Mobile Cha Cha, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X | S, PlayStation 5, PS4 Pro na PS4 PS5;
Ngwa maka mma ahụmahụ na oké ndakọrịta greatỌtụtụ mgbe, ntị ntị na-eji ngwa ndị a, ndụmọdụ silicone na nha atọ dị iche iche, S, M, na L. Ya mere, anyị nwere ike ịhọrọ ndụmọdụ ntị ziri ezi maka ahụike ka mma. Na, maka ojiji dị mfe, ọ na-abịakarị na ndu ọsọ ọsọ. Site n'ụzọ, ọ bụrụ na ịchọrọ mgbakwunye ndị ọzọ, dị ka eriri USB nkwụnye, PC njikọ, na ndị ọzọ. Obi dị anyị ụtọ ịnye ọrụ ndị a ahaziri.
Nke gara aga: Aka Control Triple Driver Low Latency Gaming Mode Kwado Ezi Ikuku Earbuds Earphone
Osote: Mpi Ahịa Agba Mix Ikuku Bluetooth Music Headphone BT-8026
Isi egwuregwu Bluetooth
Egwuregwu ekweisi na Mic
Ikuku Igweisi Ikuku
Egwuregwu Igweisi na Mic